Wararka Suuqa Kala Iibsiga: Erling Haaland Oo Heshiis La Gaaray Koox, Messi Oo Wada-hadal Kula Jira Kooxda Barcelona, Iyo Qodobo Kale
HomeWararka CiyaarahaWararka Suuqa kala iibsiga: Erling Haaland oo heshiis la gaaray koox, Messi oo wada-hadal kula jira Kooxda Barcelona, iyo Qodobo kale
June 23, 2021 Wararka Ciyaaraha, Suuqa kala iibsiga, Wararka Wargeysyada 0
Barcelona iyo Lionel Messi ayaa wadahadalo ku jira laakiin wali ma aysan ku heshiin heshiis kordhinta, Goal.
Borussia Dortmund ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay inay aqbasho dalab ku kacaya 149 milyan oo ginni oo ay ku dooneyso weeraryahankeeda Erling Braut Haaland xagaagaan. Sida laga soo xigtay Football London
Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay qaboojisay xiisihii ay u qabtay ciyaaryahanka khadka dhexe ee Borussia Monchengladbach Florian Neuhaus ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga xagaagan. Sida laga soo xigtay Liverpool Echo
Daafaca Villarreal Pau Torres ayaa iska indho tiray wararka xanta ee suuqa ku aadan xili ay jiraan xiisaha uga imaanaya Man United iyo Real Madrid. Goal
Kylian Mbappe ayaa aaminsaneyn aragtida Paris Saint-German wuxuuna doonayaa inuu baxo, sida uu sheegay Daniel Riolo oo ka tirsan RMC Sport .
Kevin-Prince Boateng ayaa diyaar u ah inuu dib ugu laabto kooxdiisii ​​carruurnimada ee Hertha Berlin, sida ay qortay Kicker .
William Saliba ayaa ka fiirsanaya dookhyadiisa kooxda Arsenal ka hor saxiixa suurtagalka ah ee ay kula soo saxiixan karto Ben White, sida ay qortay football.london .
Hakan Calhanoglu ayaa si rasmi ah ugu biiray kooxda Inter kadib markii uu ogolaaday in qandaraaskiisa AC Milan uu burburo. official website,
Tottenham ayaa dib u soo cusbooneysiisay xiisihii ay u qabtay daafaca midig ee Norwich Max Aarons, sida ay warinayso Sky Sports.
Weeraryahanka kooxda Everton Dominic Calvert-Lewin ayaa lagu soo waramayaa inuu ka soo muuqday bartilmaameed bartilmaameedka kooxda Arsenal . Sida laga soo xigtay The Telegraph
Raheem Sterling ayaan dooneynin inuu qeyb ka noqdo dalabyada Manchester City ee ku aadan Harry Kane oo ka tagaya Tottenham, sida ay warinayso ESPN.
Erling Haaland ayaa durbaba “heshiis guud” la galay kooxda Real Madrid, sida uu sheegayo Alfredo Pedulla .
AC Milan ayaa ka fiirsaneysa inay u dhaqaaqdo Dani Ceballos, sida uu sheegayo Anto Vitiello.
Arsenal ayaa ka fiirsaneysa inay u dhaqaaqdo weeraryahanka Everton Dominic Calvert-Lewin, sida ay qortay The Telegraph.
Paris Saint-Germain ayaa kalsooni ku qabta inay ku guuleysan karaan tartanka loogu jiro daafaca buuxa ee kooxda Inter Achraf Hakimi, sida ay sheeganeyso Paris Fans .
Xiddiga reer Poland Kacper Kozlowski ayaa soo jiitay xiisaha kooxaha Barcelona, ​​Juventus iyo Borussia Dortmund, sida ay qortay Corriere dello Sport.
Chelsea ayaa, sida laga soo xigtay Fichajes , raadineysa inay ka dhigto xiddiga Villarreal Gerard Moreno qorshahooda cajiibka ah ee B.
Atletico Madrid ayaa kusoo biirtay loolanka loogu jiro saxiixa daafaca Arsenal Hector Bellerin – sida ay qortay Marca .
Roma ayaa loo sheegay inay la saxiixan karto laacibka Torino ee Andrea Belotti aduun dhan € 34 million (£ 29m / $ 40m) – sida ay warinayso Calcio Mercato .